Amasaladi nemifino - iBezzia | Bezzia
I-Las amasaladi nemifino Kuyisifundo sokuqala esiwusizo kakhulu ekudleni kwaseSpain. Ngaphezu kwalokho, ngokuba nezinhlobonhlobo eziningi, singasungula futhi sakhe izitsha ezahlukahlukene nezingafani zetafula lethu. Ngalesi sizathu, eBezzia sifuna ukunika isikhala kulokhu kudla, nakho okunempilo futhi okunezimfanelo ezinamandla zokudla okunempilo.
Amasaladi nemifino kungumthombo obalulekile wamanzi, amaminerali, amavithamini, i-fiber kanye nezinto zokulandela umkhondo. Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kwayo kanye neminikelo yayo akukubi nokushintshwa ngenxa yokushisa kwenqubo yokupheka futhi lokhu kunikeza izinzuzo ezinkulu.
Esigabeni sethu esizinikezele ekuphekeni amasaladi nemifino Uzothola izindlela ezahlukahlukene zokuzilungiselela, yize into enhle ngalezi zinketho zokuqala zezifundo ukuthi zilula futhi kulula ukuzenza.
Ubhontshisi obuhlaza no-ham ku-puree wamathanga
Ubhontshisi oluhlaza no-ham yisidlo sendabuko esiphekwe iningi lethu. Namuhla, kepha, sikwenza ngokunikela ...
EBezzia sithanda kakhulu amaQuichés. Lawa maqebelengwane anomsoco abukeka njengenye indlela enhle yokuqalisa lapho sinezivakashi, ...
I-Alboronia, umama wawo wonke amathrekhi
I-alboronia, bathi, ingumama wazo zonke izibhamu. Isidlo sendabuko ebesiphekwa ngoLwesihlanu e ...
Zingaki izindlela zokupheka ezine-zucchini esiziphakamisile kuleli hlobo? Futhi namhlanje sengeza enye futhi encwadini yethu yokupheka, la maqanda aqhekeziwe nge ...
Ipentshisi, ukwatapheya nesalmon saladi
Kwesinye isikhathi awukhethi ozokupheka. Izimo ziyaphoqa futhi umkhiqizo owodwa, emibili noma emithathu mayelana nokuphonswa ...
Ama-aergergine anotamatisi a la Provençal
IZucchini ibambe iqhaza elikhulu ekuphekeni kwethu kule nyanga. Kepha akuyona ukuphela kwemifino yonyaka ...
I-zucchini eboshwe nge-crispy chickpeas ne-tahini sauce
Uzothandana nale recipe! Le ngqayi ye-zucchini eyosiwe enezinkukhu ezinoshukela kanye ne-gravy ...
Utamatisi, i-ham ne-peach isaladi
Ingadi inikela ngotamatisi nangosayizi wayo okuvumela ukuthi sikujabulele ...
Izibopho ze-Hake kukhilimu we-zucchini
Kunezitsha ezifana nalezi zinkalo ze-hake kukhilimu we-zucchini okulula kakhulu ukuzilungisa futhi ziphumelele kakhulu ...
NgeSonto sihlanganyele nawe iresiphi yenkukhu nama-alimondi, uyayikhumbula? Namuhla, siphakamisa ezinye izindlela, njengaleyo, ...
Isaladi lechickpea kanye nesanqante
Por UMaria vazquez kwenza Izinyanga ze-4 .
Isimo sezulu esihle sisimema ukuba senze izinhlelo zokujabulela ulwandle, izintaba noma ...